इटहरीका भेट्रान खेलाडी बने च्याम्पियन - Kanchan Post
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन ०९, २०७८
प्रकाशित समय: २२:००:१७
दमक / झापाको दमकमा भएको स्व. शान्ताकला स्मृती ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता–२०७८ खेलको उपाधि इटहरीका भेट्रान खेलाडी श्याम लामा र पूर्ण बुढाले जितेका छन् ।
२ दिन सम्म चलेको उक्त प्रतियोगिताको अन्तिम चरणमा दमकबाट घनश्याम खनाल र अविनासको प्रतिद्धन्द्धिद्वय इटहरीका श्याम लामा र पूर्ण बुढा रहेका थिए पहिलो चरण २१–९ र दोस्रो चरण २१–७ भएको उक्त खेलमा इटहरीका श्याम लामा र पूर्ण बुढाले नगद २० हजार सहित ट्रफि मेडल प्राप्त गरे ।
त्यसै गरी नगद १० हजार सहित ट्रफि मेडल द्वितीय स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडीद्वय घनश्याम खनाल र अविनास राई (दमक) ले प्राप्त ग¥यो । विभिन्न संघसंस्थाहरुको सहयोगमा भएको उक्त खेलमा दमकका स्थानिय सौजन्य ब्याडमिन्टन कोर्डको आयोजनामा सम्पन्न भएको थियो ।
खेल अवधि भरी अम्पायरको भूमिकामा बरिष्ठ ब्यामिन्टन खेलाडीद्वय प्रकास रार्य र सुदेन राईले मुख्य भुमिकामा हुनुहुन्थ्यो ।इलाका प्रहरी कार्यलयका इन्चार्ज डि.एस.पि. नवराज कार्की को प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । खेलको संयोजकत्व स्थानियम समाजसेवी व्यक्तित्व सञ्जय लिम्बुले निर्वाह गर्नु भएको थियो ।